Hargeysa: Xisbiga Waddani oo Muuse Biixi Ugu Baaqey in uu is-casilo -VIDEO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Hargeysa: Xisbiga Waddani oo Muuse Biixi Ugu Baaqey in uu is-casilo -VIDEO
Xisbiga mucaaradka Somaliland ee Waddani ayaa ugu baaqey Muuse Biixi Cabdi Madaxweynaha Somaliland in uu xilka iska casilo ama xil ka xayuubin lagu sameeyo maadaama ay khiyaamo qaran galeen.
Cabdiraxmaan Cirro oo shir saxaafadeed ku qabtey magaalada Hargeysa ayaa sheegay in Waraysigii uu bixiyey Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda ee Dowladda Imaaraadka Carabtu uu si fiican u sharaxay cidda ay la galeen heshiiska Berbera iyo waxa ay ka aaminsan yihiin midnimada Soomaaliya.
Cirro ayaa eedeyntii ugu kululeyd u jeediyey Muuse Biixi waxaana uu yiri:
“Siyaasadu been maaha mala awaal maaha shacabkaaga oo la hagar daameeyo maaha, danta shacabka oo laga saraysiiyo danta shakhsiga maaha, waxa cadaatay in xukumadihii kala dambeeyey ee KULMIYE hasaawe been ah ugu sheekaynayeen shacabkoodda”
Khiyaamada ugu weyn ayuu sheegay in ay tahay in Dekaddii Berbera ee ka qiimi badan 400milyan ay Soomaaliland ka qaadatey 30% halka aynu bixiney ayuu yiri 70%.
Madaxweyne Muuse Biixi waxa uu ku kacay khiyaano weyn ayuu yiri Cirro oo saddex jeer ku celiyey, waxaana uu kala dooran siiyey in uu is-casilo dadkana cafis weydiisto, doorashona ku dhawaaqo, waxaa kale oo banaan in maamus ka xayuubin lagu sameeyo. Cabdiraxmaan Cirro ayaa sidoo kale khiyaano qaran ku eedeeyey Madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo.
Wasiiru Dowlaha Arrimaha dibadda ee Midowga Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash ayaa sheegay in heshiiska Berbera ay la galeen Dowladda Soomaaliya ayna aaminsan yihiin midnimada.